I-Sunrise Cabin, iNdlovukazi uCharlotte Sound - I-Airbnb
I-Sunrise Cabin, iNdlovukazi uCharlotte Sound
Onahau Bay, Marlborough, i-New Zealand
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Allison And Daniel
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Allison And Daniel izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Siyakwamukela ku-Sunrise cabin. Ikhabethe libheke e-Onahau Bay, iNdlovukazi uCharlotte Sound futhi inokubukwa okuhle kwamanzi nehlathi lendabuko.
Ikhabhinethi itholakala cishe ngamamitha ayi-10 phezulu kwegquma ukusuka ekotishi lethu. Inendlu yokungena, yokugezela kanye nekhishi elincane.
Akukho mgwaqo ongenela e-Sunrise Cabin. Ungeza endaweni yethu ngetekisi lamanzi usuka e-Picton (imizuzu engu-20 uhambo oluqondile), ungene usuka ku-Queen Charlotte Track (imizuzu engu-20 uma ukhuphuka umqansa, awufaneleki ebumnyameni), noma uphathe isikebhe sakho.
Ikhabhinethi isendaweni enokuthula phakathi kwehlathi lendabuko. Ungezwa ukusakaza kugeleza eduze. Ungakwazi ukuphumula futhi uphumule, ujabulele ukubhukuda ogwini lolwandle noma i-jetty, usebenzise ama-kayak ethu amabili namajakhethi okuphila ukuze uhlole i-Waterfall Bay noma i-Mistletoe Bay eseduze, uhambe imizuzu eyishumi uye empophomeni nasezimpethuni ezingemuva kwendlu yethu noma uthathe ithrekhi eyimizuzu engu-20 yokukhuphuka unqamule. Bush ukuhlangana neQueen Charlotte Track. Sihamba amahora angu-2 1/2 ukusuka e-Anikiwa noma amahora angu-1 1/4 ukusuka e-Mistletoe Bay (ikhofi nama-ayisikhilimu atholakala uma isitolo sivuliwe) kule threkhi. Ungakwazi futhi ukuhamba uye e-Te Mahia uyothola ikhofi noma u-ayisikhilimu lapho isitolo sivuliwe, cishe amahora angu-1 1/2.
Azikho izitolo eduze ngakho udinga ukuza nakho konke ukudla kwakho ngaphandle kwesidlo sasekuseni sase-continental esikunikezayo. Ikhishi elisekhabetheni linebhentshi lokucwilisa, i-toaster, iketela, i-microwave encane, ifriji elincane kanye ne-bbq ene-burner ehlukile yepani noma ipani lokuthosa emphemeni wekhabethe kanye netafula elincane elingaphandle nezihlalo ezimbili. Kunikezwa ilineni lombhede namathawula.
I-moring iyatholakala uma uletha isikebhe sakho. Siwuhambo lwesikebhe lwamaminithi angu-20 ukusuka e-Picton noma cishe amahora angu-2 nge-kayak kuye ngesimo sezulu.
Ibungazwe ngu-Allison And Daniel
Sihlala ekotishi eliseduze nendlwana ngakho sizotholakala ukuze siphendule noma yimiphi imibuzo noma usizo uma kudingeka.
Hlola ezinye izinketho ezise- Onahau Bay namaphethelo